MacOS Big Sur 11.3 iyo tvOS 14.5 ayaa loo siidaayay dhammaan dadka isticmaala | Waxaan ka socdaa mac
MacOS Big Sur 11.3 iyo tvOS 14.5 ayaa loo siidaayey dhammaan isticmaaleyaasha
Sidii aan fileynay ka dib qodobka muhiimka ah ee aan aragnay Talaadadii la soo dhaafay, Apple waxay hadda soo saartay dhammaan noocyadeeda cusub ee nidaamyada hawlgalka ee qalabkeeda oo dhan. Tan waxaa ka mid ah macOS Big Sur 11.3 y tvOS 14.5.
Runta ayaa ah inaysan jirin wax layaab leh, tan iyo markii tijaabooyin badan oo tijaabo ah loo sii daayay horumariyeyaasha toddobaadyadii la soo dhaafay, waxaan mar horeba awoodnay inaan aragno wararka ay ku jiraan. Hadda, ugu dambeyntii, waxaa heli kara dhammaan isticmaaleyaasha.
Apple ayaa hada sii deysay macOS Big Sur 11.3, oo ah casriyeyn lagu sameeyay nidaamka howlgalka ee Mac AirTags, ee loogu talagalay codsiyada iPhone iyo iPad ee Apple Silicon, astaamaha cusub ee Safari iyo warar yaryar oo dheeri ah.
1 Waxay hagaajineysaa isticmaalka barnaamijyada iOS iyo iPadOS ee Apple Silicon
2 Maxaa ku cusub dhammaan Mac-yada
3 TvOS 14.5 ayaa sidoo kale loo sii daayay Apple TV
Waxay hagaajineysaa isticmaalka barnaamijyada iOS iyo iPadOS ee Apple Silicon
Haddii aad haysatid Mac Apple Silicon cusub, kuwa leh processor-ka M1, oo aad wadid barnaamijyada iPhone iyo iPad, kani waa cusbooneysiin aad rabto inaad rakibto. Big Sur-kan cusub wuxuu leeyahay goobo cusub Taabo beddelka sidaa darteed waad dejin kartaa amarrada kumbuyuutarka halkii aad ka gali lahayd taabashada aad caadiyan ku qaban lahayd iPhone ama iPad. Si aad u awood u yeelatid Beddelka Beddelka, guji magaca dalabka ee ku yaal barta menu oo dooro Xulashooyinka.
Qof kasta oo ku ciyaaraya ciyaar iPhone ah Mac M1, cusbooneysiinta ayaa leh jilitaan cusub oo darawal ah oo khariidaynaysa qalabka xakamaynta ciyaarta ee kumbuyuutarka iyo jiirka Mac. leedahay taageero hibernate.
Maxaa ku cusub dhammaan Mac-yada
La jaanqaadka kantaroolayaasha konsoles-yada cusub ee 'Sony' iyo 'Microsoft' ..
Cusboonaysiinta 'macOS Big Sur 11.3' waxay leedahay dhowr astaamo oo cusub oo loogu talagalay dhammaan Mac-yada, ha ahaadaan kuwa Intel ama M1 chips.
AirTags: Codsiga "Raadinta" wuxuu hadda la shaqeeyaa aaladda cusub ee Apple tracker.
Iswaafajin badan kontaroolayaasha konsoleerka- La jaanqaadista PlayStation 5 iyo Xbox Series X / S kantaroolayaasha ciyaaraha macOS.
HomePod- Waad dejin kartaa labo HomePods ah sida ikhtiyaarka soo saarista codka ee asalka ah iyo labada HomePods waxay u muuqdaan inay yihiin hal xirmo oo ku hadla qalabka rikoodhada ee Mac-gaaga.
Muusikada- Ikhtiyaar gawaadhida loo yaqaan 'autoplay option' oo sii wadaya muusigga muusigga ka dib markii la sameeyay liis garayn, liis gareynta maktabad cusub oo "Lagu Sameeyay Adiga" iyo "Dhageyso Hada" ayaa hadda daboolaysa dhacdooyinka tooska ah
Noticias- Qayb adiga kuu gaar ah "Adiga" oo ku jirta tabka Apple News +, tab cusub oo Baadh.
Rugta la hagaajiyay Batariga: Apple waxay hagaajisay qaabkan si batterigaaga macBook-ga si buuxda u shaqeeya.
Xusuusin- Qalab kala-soocid ka fiican, awoodda jiidista iyo hoos u dhigidda xusuusinta liis kale, iyo taageerada liisaska daabacaadda.
Safari: habeynta bogga guriga, Taageerada Video WebM.
Taageero: Tab cusub oo ku saabsan Mac-kan 'wuxuu bixiyaa macluumaad ku saabsan nidaamkaaga AppleCare +, iyo badhanka Hel Taageero si aad u bilowdo kulan taageero ah.
TvOS 14.5 ayaa sidoo kale loo sii daayay Apple TV
tvOS 14.5 waxay u keentaa taageero xakamaynta ugu dambaysa PlayStation y Xbox jiil cusub. Waxay kale oo ay keeneysaa taageero muuqaal dheelitirka midabka cusub ee TV-gaaga.
Iyadoo loo marayo hannaan cusub oo ah dheelitirka midabka, Apple TV wuxuu la shaqeeyaa iphone iyo dareemayaasha horumarsan si loo hagaajiyo tayada sawirka telefishanka. Apple TV wuxuu adeegsadaa dareeraha iftiinka ee iPhone-ka si loo barbardhigo isu dheelitirka midabka iyo tilmaamaha heerka warshadaha ee ay adeegsadaan sawir qaadayaasha adduunka. Adoo adeegsanaya xogtaan, Apple TV waxay si otomaatig ah u waafajineysaa wax soo saarkeeda fiidiyoowga ah si ay u keento midabbo aad u badan oo sax ah iyo kala duwanaansho soo hagaagtay, adigoon u baahnayn inaad hagaajiso goobaha TV-gaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » MacOS Big Sur 11.3 iyo tvOS 14.5 ayaa loo siidaayey dhammaan isticmaaleyaasha
Cusboonaysii sidoo kale macOS Catalina 10.15.7
Qaar ka mid ah amarada AirTags waa la horumarinayaa
Ka hel qoraaladii ugu dambeeyay Apple iyo Mac.